စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသတင်းထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း | တရုတ်စက်မှုသတင်းများစက်ရုံ
Due to the impact of the virus happened in Wuhan , the Global Association for mobile communication systems (GSMA) announced the cancellation of the world mobile communication congress 2020 (MWC), which was scheduled to be held in Barcelona from February 24 to February 27. The MWC conference is a...ဆက်ဖတ်ရန် »
USB C HUB production procedure.(SOP Standard) USB Type C HUB Quality inspection check list to guarantee quality reliability 1.Packaging,Cosmetic &Dimensions of Hubs. 2. All Type c Hub ports Functions testing 1)Write speed test: 20Gbps >800Mbps, 10Gbps >420Mbps; 10Gbps >350Mbps; 2)S...ဆက်ဖတ်ရန် »
1 month later will be HK mobile electronics fair Autumn phase. maybe you are thinking about should I go? BoRun asaexhibitor also with same worry at the beginning. we talked with host and ask how do they think about the people flow this year. they showed us their HK brand co-worker daily living ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Exclusive 12 IN 1 Multi-functional USB C HUB+Speaker+Wireless Charger will be first launched. Our exclusive 11 in 1 Wireless Charger Hub was first launched in April at HK fair, it is an amazing product and welcomed for the marketing, since June it had been sold well in the marketing, especially...ဆက်ဖတ်ရန် »
Hub အားသွင်းဖောက်သည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. 11 1 မှာကြိုးမဲ့။
8th July 2019 One customer from South Asia got the wireless charging docking station on hands today.(Monday) and sent the feedback to us, they like this exclusive design so much and askedadiscount, the Macbook air original power adaptor is 30w, How can we charge the laptop and make all accessor...ဆက်ဖတ်ရန် »
USB C HUB asabooming industry with good margins since Nov. 2018, it is with positive prospects. If you are looking foranew category to involved, maybe following information is useful. According to China export official records, Here we will analyse Japan marketing from2sectors. Sector one: ...ဆက်ဖတ်ရန် »
တရုတ်ထံမှတင်သွင်းထားတဲ့ 2018 နှင့် 2019 ကို USB ကို C Hub ထိပ်တန်းအဆင့်
အချိန် post: 08-19-2019
စျေးကွက်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်ကျနော်တို့ 2018 ခုနှစ်အောက်ပါနိုင်ငံများအဖြစ်တရုတ်ထံမှတင်သွင်းထားတဲ့ကို USB ကို C Hub ၏ထိပ်ရာထူးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ (အရေအတွက်အားဖြင့်လှည့်) ။ နိုဝင်ဘာကတည်းက 2018 အတွက်က USB ကို C စက်မှုလုပ်ငန်းအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ 2018 အမေရိကန်နိုင်ငံ 4603605 ဟောင်ကောင် 3248671 ဂျာမဏီ 1245451 Holla ၏ရာထူး ...ဆက်ဖတ်ရန် »
USB မှတ်ကို C စက်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။
အချိန် post: 08-12-2019
concept ကို USB 3.1 Gen2 Intel ကနှင့်အခြားကုမ္ပဏီများကအစပျိုးခဲ့သည့်နောက်ဆုံးပေါ် USB မှတ်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဒေတာထုတ်လွှင့်မြန်နှုန်း 10Gbps အထိတိုးမြှင်နိုင်ပါသည်။ USB က 3.0 (ဆိုလိုသည်မှာကို USB 3.1 Gen1) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သစ်ကို USB နည်းပညာတစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်ဒေတာ encoding က system ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးထောက်ပံ့ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Apple ကအသစ်တခုကို USB-C မှာဒီဂျစ်တယ်အသံဗီဒီယို Multi-port ကို converter ကို A2119 ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်
အချိန် post: 08-10-2019
Apple ကမကြာသေးမီကအဟောင်း A1621 အစားထိုးအသစ်တစ်ခုကို USB-C မှာဒီဂျစ်တယ်အသံဗီဒီယို Multi-port ကို converter ကို A2119 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဟောင်းကို A1621 သာ HDMI 1.4b ထောက်ခံပါတယ်နေစဉ်ဗားရှင်းအသစ်ကို A2119 က, ထောက်ခံကိရိယာများပေါ်တွင် HDMI 2.0 နှင့်လုပ်နိုင်တဲ့ output ကို 3840 x ကို 2160 / 60Hz ထောက်ခံပါတယ်။ USB နဲ့ USB မှတ်-C အ interfaces လည်းရှိပါတယ်။ တစ်ဦးအတွက် ...ဆက်ဖတ်ရန် »